Gochoonni misooma waliinii gufachiisan misooma jibbuurraa maddu
Gochoonni misooma waliinii gufachiisan misooma jibbuurraa maddu Featured
Misoomaan ala biyya miilla lamaan dhaabbate arguun abjuudha. Addunyaa marti kan hubatee fuulasaa ulaa misoomaatti qajeelchuun sochiirratti argama.Haa ta’u malee, hundi sochii walfakkaatu taasiseef guddina walfakkaatu galmeessa jechuu miti. Adeemsi misoomuuf taasifamu kun bakkaa bakkatti yookiin biyyaa biyyatti socho’uullee kan of keessatti hammatudha.
Heera biyya keenyaa keeyyatni 41 jalatti akka tumametti lammiin biyyattii kamuu kutaa biyyattii kamuu misoomsuufi qabeenya horachuuf mirga qaba.
Hojiirra oolmaa heera keeyyata 41fi misooma waliinii ilaalchisee namoota haasofsiisuu yaalleerra. Obbo Mulugeetaa Ayyaaloo Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaatti, Daarekteera Daarektoreetii Bulchiinsa Haqaafi seera hariiroo hawaasaatisi.
Akka isaan jedhanitti, heericha qixa sirriin hojiitti hiikuuf abbootiin qabeenya ilaalcha hawaasa naannawa fayyadanii fayyadamoo ta’uu gonfachuu qabu. Kana malees, aadaafi safuu ummata naannichaa kabajuufi utubuun miira abbaa qabeenyummaa ummataa mirkaneessuun aantummaa ummatarraa argachuuf dhama’uu qabu.
Haa ta’u malee, yeroo tokko tokko faallaa kanaan misooma diriirsuuf wayita carraaqamu argina. Gama kamiinuu misooma hirmaannaa ummataa hin qabnerraa firii eeguun rakkisaa waan ta’eef hirmaannaa ummataaf xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha.
Akka ibsasaaniitti, ummatnis misoomaan ala jireenya fooyya’aa jiraachuu waan hindandeenyeef tumsa tumsuu qaba. Hanqinni dandeettii raawwachiisummaa bakkaa bakkatti mul’atu gufuu misoomaa waan ta’eef kanarrattis ciminaan hojjechuun barbaachisaadha.
Haaluma walfakkaatuun wantoota heera keessatti tumaman hojiitti hiikuun barbaachisaadha. Kunis naannolee barbaadan keessatti misoomuufi misoomsuuf hojii jajjabeessaan jiraatus naannoo tokko tokkotti ammayyuu lagaafi sabaan namoota qooduun ni mul’ata.
Ta’us hanga biyya tokko waliin ijaaraa jirutti haalduree tokko malee waliin misoomuun barbaachisaadha. Hojiileen misoomaa hedduun lafaan kan walqabatan waan ta’eef gatii lafasaaf qonnaan bulaan beenyaa ga’aa kennuun egereesaa dhagaa hin sochoonerra dhaabuun barbaachisaadha.
Haa ta’u malee, yeroo tokko tokko rakkoo abbootiin taayitaa rakkoo bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraatiin xaxaman gama tokkoon qonnaan bulaa beenyaas lafas dhowwachuun wayita hiraarsan mul'atu.
Akkuma muki “Kan nu fixe dabaadhuma keenya” jedhe jedhamu san qonnaan bulaa kaleessa haala hinmalleen lafasaarraa buqqa’eef ittigaafatamaan eenyu akka ta’e tilmaamuun nama hin rakkisu.
Kana ammoo mootummaanis yeroowwan gara garaa irra deddeebiin ibsaa tureera. Dura taa’aan Kongirasii Biyyaalessa Oromoo, Obbo Tolasaa Tasfaayee akka jedhanitti, namni misooma jibbu hinjiru. Garuu misoomuun hiyyoomuu ta’uu hin qabu.
Walumaagalatti, sirna heericha keessatti akkuma tumamee jiru namni kamuu kutaa biyyattii fedhetti misoomsuufi misoomuuf mirga guutuu qaba. Haa ta’u malee, aadaa, safuufi fayyadamummaa ummata naannichaaf xiyyeeffannaa kennuun ni barbaachisa. Gama heeraatiinis ta’e dantaan ummatni tokko misooma naannoosaarraa argachuu malu hojiitti hiikuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 28803
Guyyaa mara/All_Days 1313314